နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကောငျး(၁၃)ခု |
ပျေါတူဂီနာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုကတော့ အသငျးဟောငျးအတှကျ တဈကြော့ပွနျခရီးအစမှာပဲ သှငျးဂိုး(၂)ဂိုးနဲ့အဖှငျ့လှခဲ့ပါပွီ။
အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပမေယျ့ ထိပျတနျးအဆငျ့စှမျးဆောငျရညျတှပွေသနဆေဲဖွဈသူ စီရျောနယျလျဒိုဟာ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ အသငျးဖျောတှနေဲ့အကောငျးဆုံးခြိတျဆကျကစားခဲ့သလို ပွိုငျဘကျအသငျးဧရိယာအတှငျးမှာ ဘောလုံးထိခကျြသိပျမရှိခဲ့တာတောငျ (၂)ဂိုးအထိသှငျးယူပွခဲ့ပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ဗွိတိနျနာမညျကြျော The Sun သတငျးစာ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကောငျး(၁၃)ခုကို ထုတျနုတျဖျောပွခဲ့ပွီး အဲဒီမှတျတမျးကောငျးတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတော့ . . .
၁၂ နှဈ – စီရျောနယျလျဒိုဟာ ၂၀၀၉၊ မလေတုနျးက အာဆငျနယျနဲ့ပှဲမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ နောကျဆုံးပါဝငျကစားခဲ့ပွီး အခု (၁၂)နှဈအကွာမှ နောကျတဈကွိမျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲထှကျကစားခဲ့တာကွောငျ့
ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ တဈပှဲနဲ့တဈပှဲကွား နှဈအကွာဆုံးအခြိနျယူခဲ့ရတဲ့ကစားသမားအဖွဈ စံခြိနျတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘောလုံးထိခကျြ(၈)ကွိမျ – နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ ပွိုငျဘကျအသငျးပယျနယျတီဧရိယာအတှငျး စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ဘောလုံးထိခကျြက (၈)ကွိမျသာရှိခဲ့ပွီး တဈပှဲလုံးမှာတော့ (၆၃)ကွိမျရှိခဲ့ပမေယျ့ (၂)ဂိုးအထိသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဂိုးပေါကျကနျမှု(၆)ကွိမျ – စီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ပှဲဦးထှကျမှာ (၂)ဂိုးသှငျးယူဖို့ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးခကျြ(၆)ကွိမျသာပွုလုပျခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ(၆)ကွိမျမှာ (၂)ကွိမျဂိုးပေါကျတညျ့ခဲ့သလို အဲဒီ(၂)ကွိမျစလုံးဂိုးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုး (၈၆)ဂိုး – အခုဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုးအရအေတှကျက (၈၆)ဂိုးရှိလာပွီး ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစာရငျးမှာ အဆငျ့(၄၄)နရောတကျရောကျခဲ့တဲ့အပွငျ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျဂိုး(၁၀၀)ပွညျ့အောငျ သှငျးယူနိုငျဖို့ရှိနပေါပွီ။
(၁၅)နှဈဆကျ သှငျးဂိုး(၃၀) – နယူးကာဆယျဘကျကို စီရျောနယျလျဒို သှငျးယူခဲ့တဲ့အဖှငျ့ဂိုးက ၂၀၂၁ ခုနှဈအတှငျး သူ့ရဲ့ဂိုး(၃၀)မွောကျသှငျးဂိုးဖွဈခဲ့ပွီး ဘောလုံးပွက်ခဒိနျတဈခုအတှငျး (၁၅)နှဈဆကျတိုကျ ဂိုး(၃၀)နဲ့အထကျသှငျးယူခဲ့တဲ့ တဈဦးတညျးသောကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
တဈနာရီ (၂၀.၂)မိုငျ – ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ စီရျောနယျလျဒို ဒုတိယဂိုးသှငျးယူခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ပွေးအားက တဈနာရီကို (၂၀.၂)မိုငျအထိရှိခဲ့ပွီး ဒါက အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျကစားသမားတဈဦးအတှကျ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးတဲ့စှမျးဆောငျရညျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဘောလုံးပေးပို့မှု – စီရျောနယျလျဒိုဟာ ပွိုငျဘကျအသငျး Final Third ဇုနျမှာ ဘောလုံးပေးပို့မှု (၁၇)ကွိမျပွုလုပျခဲ့ပွီး အဲဒီထဲမှာ အခှငျ့အရေး(၁)ကွိမျဖနျတီးပေးခဲ့သလို ဘောလုံးပေးပို့တာမှာတိကမြှုက (၈၆.၇%)ရှိခဲ့ပါတယျ။
Golden Oldie – ယူနိုကျတကျအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အသငျးအတှကျအသကျအကွီးဆုံးဂိုးသှငျးသူတှထေဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုထကျ အသကျပိုကွီးတာဆိုလို့ ဂန်ထဝငျကစားသမားနှဈဦးဖွဈတဲ့ ရိုငျယနျဂဈနဲ့ ပေါလျစခိုးလျတို့သာရှိပါတော့တယျ။
တဈပှဲ(၂)ဂိုး – စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ တဈပှဲတညျး(၂)ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တာက ပှဲပေါငျး(၂၀၀)အထိရှိလာပွီဖွဈပွီး သူ့ရဲ့အဓိကပွိုငျဘကျမကျဆီရဲ့အရအေတှကျနဲ့ တူညီသှားပါပွီ။
အာဆငျနယျ၊ နောဝဈချြ – စီရျောနယျလျဒိုဟာ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ (၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ သူ့သှငျးဂိုးအရအေတှကျက အာဆငျနယျ၊ နောဝဈချြ(၁ဂိုးစီ)အသငျးတို့ထကျတောငျ ပိုမြားနပေါတယျ။
ဘောလုံးပေးပို့မှု – စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတှထေဲမှာ ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈကို (၉)ကွိမျ၊ လုချရှောကို (၇)ကွိမျ၊ ပေ့ါဘာကို (၇)ကွိမျနဲ့ မကျဂှိုငျးယားဆီ (၅)ကွိမျပေးပို့ခဲ့ပါတယျ။
ဘောလုံးရရှိမှု – စီရျောနယျလျဒိုဆီ ဘောလုံးပေးပို့မှုအမြားဆုံးပွုလုပျခဲ့တာက ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈ၊ ပေ့ါဘာ၊ မာတဈတို့ပဲဖွဈပွီး စုစုပေါငျး(၁၀)ကွိမျစီပေးခဲ့ကွပါတယျ။
အထူးခွားဆုံးမှတျတမျး – ၂၀၀၉၊ ဧပွီလတုနျးက ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ စီရျောနယျလျဒို (၂)ဂိုးသှငျးယူပွီးခဲ့တဲ့နောကျ (၁၂)နှဈတာကာလအတှငျး ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ(၇)ကစားသမားတှဟော
အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ တဈကွိမျမှ (၂)ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘဲ အခု စီရျောနယျလျဒိုက ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ (၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ နံပါတျ(၇)ကစားသမားဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်း(၁၃)ခု
ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ အသင်းဟောင်းအတွက် တစ်ကျော့ပြန်ခရီးအစမှာပဲ သွင်းဂိုး(၂)ဂိုးနဲ့အဖွင့်လှခဲ့ပါပြီ။ အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ထိပ်တန်းအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်တွေပြသနေဆဲဖြစ်သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ အသင်းဖော်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်ကစားခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်အသင်းဧရိယာအတွင်းမှာ ဘောလုံးထိချက်သိပ်မရှိခဲ့တာတောင် (၂)ဂိုးအထိသွင်းယူပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဗြိတိန်နာမည်ကျော် The Sun သတင်းစာ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်း(၁၃)ခုကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဲဒီမှတ်တမ်းကောင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ . . .
၁၂ နှစ် – စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၉၊ မေလတုန်းက အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် နောက်ဆုံးပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး အခု (၁၂)နှစ်အကြာမှ နောက်တစ်ကြိမ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲထွက်ကစားခဲ့တာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲကြား နှစ်အကြာဆုံးအချိန်ယူခဲ့ရတဲ့ကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘောလုံးထိချက်(၈)ကြိမ် – နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်းပယ်နယ်တီဧရိယာအတွင်း စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဘောလုံးထိချက်က (၈)ကြိမ်သာရှိခဲ့ပြီး တစ်ပွဲလုံးမှာတော့ (၆၃)ကြိမ်ရှိခဲ့ပေမယ့် (၂)ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးပေါက်ကန်မှု(၆)ကြိမ် – စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ပွဲဦးထွက်မှာ (၂)ဂိုးသွင်းယူဖို့ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက်(၆)ကြိမ်သာပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီ(၆)ကြိမ်မှာ (၂)ကြိမ်ဂိုးပေါက်တည့်ခဲ့သလို အဲဒီ(၂)ကြိမ်စလုံးဂိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုး (၈၆)ဂိုး – အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုးအရေအတွက်က (၈၆)ဂိုးရှိလာပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးစာရင်းမှာ အဆင့်(၄၄)နေရာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုး(၁၀၀)ပြည့်အောင် သွင်းယူနိုင်ဖို့ရှိနေပါပြီ။
(၁၅)နှစ်ဆက် သွင်းဂိုး(၃၀) – နယူးကာဆယ်ဘက်ကို စီရော်နယ်လ်ဒို သွင်းယူခဲ့တဲ့အဖွင့်ဂိုးက ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း သူ့ရဲ့ဂိုး(၃၀)မြောက်သွင်းဂိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘောလုံးပြက္ခဒိန်တစ်ခုအတွင်း (၁၅)နှစ်ဆက်တိုက် ဂိုး(၃၀)နဲ့အထက်သွင်းယူခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
တစ်နာရီ (၂၀.၂)မိုင် – ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒို ဒုတိယဂိုးသွင်းယူချိန်မှာ သူ့ရဲ့ပြေးအားက တစ်နာရီကို (၂၀.၂)မိုင်အထိရှိခဲ့ပြီး ဒါက အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘောလုံးပေးပို့မှု – စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်း Final Third ဇုန်မှာ ဘောလုံးပေးပို့မှု (၁၇)ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ အခွင့်အရေး(၁)ကြိမ်ဖန်တီးပေးခဲ့သလို ဘောလုံးပေးပို့တာမှာတိကျမှုက (၈၆.၇%)ရှိခဲ့ပါတယ်။
Golden Oldie – ယူနိုက်တက်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အသင်းအတွက်အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူတွေထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုထက် အသက်ပိုကြီးတာဆိုလို့ ဂန္ထဝင်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ်နဲ့ ပေါလ်စခိုးလ်တို့သာရှိပါတော့တယ်။
တစ်ပွဲ(၂)ဂိုး – စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် တစ်ပွဲတည်း(၂)ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာက ပွဲပေါင်း(၂၀၀)အထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်မက်ဆီရဲ့အရေအတွက်နဲ့ တူညီသွားပါပြီ။
အာဆင်နယ်၊ နောဝစ်ခ်ျ – စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် သူ့သွင်းဂိုးအရေအတွက်က အာဆင်နယ်၊ နောဝစ်ခ်ျ(၁ဂိုးစီ)အသင်းတို့ထက်တောင် ပိုများနေပါတယ်။
ဘောလုံးပေးပို့မှု – စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေထဲမှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကို (၉)ကြိမ်၊ လုခ်ရှောကို (၇)ကြိမ်၊ ပေ့ါဘာကို (၇)ကြိမ်နဲ့ မက်ဂွိုင်းယားဆီ (၅)ကြိမ်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ဘောလုံးရရှိမှု – စီရော်နယ်လ်ဒိုဆီ ဘောလုံးပေးပို့မှုအများဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တာက ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်၊ ပေ့ါဘာ၊ မာတစ်တို့ပဲဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း(၁၀)ကြိမ်စီပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အထူးခြားဆုံးမှတ်တမ်း – ၂၀၀၉၊ ဧပြီလတုန်းက ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒို (၂)ဂိုးသွင်းယူပြီးခဲ့တဲ့နောက် (၁၂)နှစ်တာကာလအတွင်း ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ်(၇)ကစားသမားတွေဟာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ တစ်ကြိမ်မှ (၂)ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘဲ အခု စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ နံပါတ်(၇)ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
PSG အသငျးနညျးနဲ့ပတျသကျပွီး တဈစက်ကနျ့လောကျတောငျ မစဉျးစားဖူးဘူးလို့ ဂှါဒီယိုလာဖှငျ့ဟ